Ajwayelekile kubo bonke ukubukeka iselula lwanamuhla singethuki umsebenzisi abanolwazi. Nakuba ngezinye izikhathi idivayisi uhlobo Homely futhi abavamile efihla isethi ezithakazelisayo kakhulu izici. Ngakho nanku isethi uye oyedwa omele Fly c isihloko ukucasha 4413.
Ngu uhlobo Fly 4413 ifoni sifana lenqwaba wakubo "Android." Standard plastic edging uzama ukubonakala njengamathuba metal futhi ngobumnene imikiswe ukuze kube lula ukusetshenziswa side akusho bungakhiphi smartphone phakathi kwabanye.
Ngezansi isibonisi kukhona izinkinobho kwemikhumbi, futhi phezulu - inzwa yokulinganisa, ukukhanyisa, efakwa endlebeni futhi ezimbili megapixel ikhamera.
isisindo okuphansi, amagremu 150 kuphela, futhi emaphethelweni oyindilinga ukuvumela amanga efonini kahle nje isandla uma usebenza noma izingcingo. Ukuphepha ingilazi ihlanganisa wonke phambi ingxenye idivayisi, ngesikhathi esifanayo ulondoloze isimo ukubonisa ekulimaleni nothuli.
amadivaysi eziphezulu Fly 4413 zitholakala USB ne indinganiso umgodi we-earphone nge 3.5 mm jack.
On the ngemuva kudivayisi master ikhamera kokuba 8 megapixel futhi flash esikabili. Ngezansi, eduze ilogo yenkampani, huddles Mesh smartphone isikhulumi.
Ilungelo kuyinto inkinobho amandla, kodwa lokho kwesokunxele control ivolumu.
Amajaji ezingemuva smartphone ogibele inqwaba Slots ukuthi ngokwejwayelekileyo is a plus, kodwa kukhona amathuba umonakalo. Ngu panel kufihla slot for flash card, ibhethri esikhiphekayo namaseli ezimbili-SIM khadi.
Ziphethe smartphone Fly 4413 elikhanyayo kakhulu ngobukhulu-4.7 intshi we IPS-isibonisi kokuba nesinqumo kuhle ezinhle 960 ngo 540. Isibonisi ivikelwe ingilazi kusukela iziphi izici zangaphandle.
inzwa zefoni ngaphandle inkinga Ungasingatha kuthintwa emihlanu, kodwa uma usebenza ngedivayisi kuyafaneleka ukuzwela eliphansi isibonisi. Umsebenzisi uzodinga ukuba sizivumelanise nengcindezi enamandla phezu inzwa.
Inzuzo elingenakuphikwa Fly ikhamera 4413 kuyisiko ukuba zinsizakuphila 8 megapixel. Ikhamera Ukulungiswa e 3840 kuya 2160 futhi ngeke sijabulise abalandeli kwezithombe. Lezi izimfanelo ungavumeli kuphela izithombe eliphezulu, kodwa futhi urekhode amavidyo format HD Full. Endaweni ehlukile, kufanele kuphawulwe isinqumo high isiqophi sokudubula 1920 by 1080 Amaphikseli. Lezi izinzuzo kuthiwa lwaqiniswa a ezimbili LED-flash.
Ikhamela ngaphambili iphaneli, futhi, kungaba ukujabulisa isinqumo esihle megapixels ezimbili.
Lezi izici zekhamera kwabukeka ku ngemuva amadivayisi eziningi ezifanayo.
I Ukucaciswa ifoni Fly 4413 akuzona eliphansi kuya nozakwabo eziningi zanamuhla.
A ukumangala emnandi iyona MT6582M processor, has cores ezine futhi ivumela ifoni ukubhekana umsebenzi onzima. CPU imvamisa kule imodeli has amaningi njengoba 1300 MHz.
A okhanyayo kancane nalemvelaphi ukuthi libukeka eyodwa igigabhaythi RAM, kodwa ngomqondo obanzi lena ngempela ngokwanele. Uma kungenjalo eqinile umthwalo smartphone ngokuqinile ukufeza imisebenzi yabo.
Ucingo ifakwe isiqophi namafutha Mali 400 Mp2, kakhulu zwí kucutshungulwa okuqukethwe.
Yona le umqondo jikelele Fly 4413 inkumbulo yakhe umthamo ezincane, 4 gigabytes kuphela. Nokho, ukuze ulungise leli kusimo kungaba kwalokho evamile drive flash. Ukwandiswa inkumbulo nge microSD kuze kube mhlawumbe gigabytes 32.
Ukusebenza kwabo bonke izinzuzo idivayisi kakhulu kuthinta isimo ibhethri ye-smartphone. Ifoni yesimanje, ifakwe umthamo webhethri ka 1800 Mah, ubukeka Okuqukethwe akuzwakali. Kuyinto kule umthamo nebhethri has a Fly 4413.
Ukunikeza iselula ezinhle futhi ukugxusha isibonisi omkhulu elikhanyayo, abakhiqizi akazange uhlupho ukuhlomisa yidivayisi enamandla ngokwengeziwe amandla ithuluzi. Imiphumela ziyabonakala njengoba hhayi isikhathi eside kangaka futhi ukusebenza smart phone ngaphandle kwemali ethe xaxa.
Ngaphansi kwezithibelo ezithile phezu ukukhanya kwesikrini futhi izici ezingeziwe ibhethri yefoni sizonikeza mayelana 6-7 amahora ukusetshenziswa njalo.
Nokho, okungenani kanye Fly 4413 ibhethri kungenzeka ubambe kahle ngolunye usuku.
Idivayisi isebenzisa omunye izinguqulo ezintsha "Android" - 4.4.2, okuyinto inzuzo enkulu Ukukhetha kwezicelo ewusizo, futhi ukusebenza nefoni. Kuyaphawuleka ukuthi ngemuva kokufakwa kudivayisi ihlale ingatholakala 2,34 kuphela gigabytes yimemori. Lesi simo kwenza isidingo flash imemori khadi Izithako zidingeka ngokushesha.
Uhlelo efakwe akuyona ugcwale kwesofthiwe eyengeziwe, okwenza ifoni kujabulise kakhudlwana futhi kulula. "I-Android" version ikuvumela ukuba anezele iphakethe eyisisekelo Lwezinhlelo khulula futhi ewusizo. Smartphone ngaphandle kokulibala ukusebenza nge-Skype kanye nezinhlelo ezifanayo, noma inqubo isiqophi-intanethi.
Futhi, idivayisi kungenziwa ithungwe ukuba inguqulo entsha noma ukwakha "Android".
Kuyadingeka ukuba dwebela Dynamics smartphone. Umsindo muhle kakhulu futhi elizwakala kakhulu ngolweshumi kokubili izikhulumi. Izinkinga izingcingo ezingabanjwanga akufanele kwenzeke ngenxa umsindo nezingahlobene nendaba.
Nokho, Sebenza ngama-headphone kakhulu, liletha imizwa omuhle, akusiyo mayelana-headphone, uya ngqo kit.
Ngichachambe ezokungcebeleka noma lula ukusebenza kwe-abanikazi idivayisi kuzosiza eziningi izici enhle. Ukuze usebenze nge-Internet Fly 4413 smartphone has kokubili inthanethi mobile evamile, futhi sici-Wi-Fi.
izici ezincane njengokuzilibazisa umsakazo, video umdlali audio, izwi rekhoda futhi blyutuza sikhona zalolu hlobo locingo.
Naphezu kweqiniso lokuthi Lempukane 4413 - smartphone isabelomali, it has izikhala ezimbili ama-SIM khadi. Ngeshwa, module eyodwa kuphela ukuxhumana, uma kushayelwa ifoni ngokuzenzakalelayo ithumela i-SIM card wesibili kwimodi eceleni. Isebenza njengoba ifoni ye-GSM, ngakho kanye 3G-uxhumano.
Smartphone has yonke imishini evamile. Okuvame kakhulu ye-USB ye-USB, idivayisi inethiwekhi, empeleni kakhulu smart, ibhethri, headphones and Yebo, iziqondiso.
Ngaphezu kwalokho, ngezinye izikhathi ukuthola incwajana ukuhlabana nge ukukhangisa ezinye izinhlelo zokusebenza kanye ulwazi usumisiwe izinhlelo ephelele.
Njengoba Smartphones isabelomali kakhulu, ama-headphone elafika nalokho okugcizelelwe hhayi zinkulu. Ngaphezu ukusebenza sasivumela ethule kukhona ompofu izinga umsindo.
Itholakala ikhithi ukuze Fly 4413 imfundo ivumela ngaphandle nobunzima kakhulu ukubhekana kakhulu imisebenzi kanye izici zefoni yakho.
Izibuyekezo mayelana idivayisi
Yiqiniso, ngaphambi kokuthenga idivayisi enjalo kufanele uhlole yena Fly 4413, izimpendulo ke kusukela wathenga futhi lwahlolwa abantu ifoni.
Sathenga Fly IQ 4413 izibuyekezo imisebenzi efanayo kungaba ngokuphelele ezahlukene. Kunzima kakhulu ukunquma ekukhetheni nokudala ukungaqondi okuncane.
Okokuqala kudingeka unqume izici smartphone kwezinhloso zenzuzo, futhi ngemva kokuqalisa ekutadisheni isipiliyoni siqu zabantu. Kuyinto efiselekayo ukubuka amazwana kumawebhusayithi Sekuvele kufakazelwe noma olusemthethweni.
Abantu abaningi usebenzisa idivayisi kwakungafanele ukunambitheka imisebenzi ethile zedivayisi. Lokhu kungenxa okulindele prohibitively okusezingeni eliphezulu kusuka kuhle, kodwa namanje smartphone isabelomali. Nokho, ngokuvamile kakhulu ukukhuluma eziningana idivayisi amaphutha eziphawulekayo, kakade okukhulunywe ngaye esihlokweni.
Kunoma ikuphi, kuyodingeka ukuba amphuzise umbono idivayisi kusukela isipiliyoni siqu usebenzisa i-smartphone.
Empeleni, kakade inzuzo enkulu ibukeka ifoni isabelomali neqoqo ezinhle kakhulu imisebenzi. Kunzima ingasaphathwa ikhamera kakhulu - kokubili eziyisisekelo futhi phambi. Quality izithombe isinqumo esihle futhi Okugcwele abathandi HD-isiqophi abanesifiso isithombe. Ungakhohlwa mayelana phambi kwekhamera.
Ukubonisa usayizi umxhwele kwenza idivayisi yokuchitha isizungu kujabulise futhi ikuvumela ukuba ujabulele kokubili video nezithombe.
Umsebenzisi-friendly kudivayisi design nge emakhoneni esithambile futhi isevisi amakhadi amabili SIM sigcwalisa induduzo ukusetshenziswa efonini. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza entsha "Android" nge ibhantshi enhle kanye zaziziningi izicelo ewusizo - plus eziqondile efonini yakho.
Iron Fly e 4413 luluhle kakhulu, kokubili smartphone zamanani aphansi. Processor core kanye gigabytes ezine RAM, ukugcwaliswa ezinhle, okuvumela umsebenzisi Angesabi unyathela amabhuleki.
Ngeshwa, zikhona nemiphumela ethile engathandeki esiphawulekayo kudivayisi.
Ngokungangabazeki, le ethile ephawuleka kakhulu inani miserly memory yangaphakathi for smartphone yesimanje. Ukuba khona gigabytes ezine, cishe emibili yayo elalihlala yesistimu yokusebenza - embi kakhulu.
Futhi, ephethe namandla 1800 mah ibhetri ayihambisani ngisho kumadivayisi eshibhile futhi abakwazi ukunikeza ukusebenza yesikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, izinkinobho touch-sensitive ukulawula, kukhona phansi kudivayisi zigqanyisiwe kuphela uma esebenza ngokuqondile nabo. Lapho ukukhanya ezimbi kuyodingeka ukuba isebenzise inkumbulo yabo.
Njengoba ifoni eyenziwe ngepulasitiki nokuphepha ingilazi abakwazi ukuqhosha ukumelana okuhle ukushaqeka, kufanele uvikele idivayisi yakho ngosizo ikhava zokuzivikela.
Ukwandisa ubude kudivayisi kunganciphisa inani izicelo asebenzayo futhi ukunciphisa ukugqama zedivayisi isibonisi. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba ukuxazulula inkinga lomuntu owayezongena esikhundleni elula yebhethri umfuziselo namandla kakhulu.
Isithonjana. Kuyini lokhu ifolda bese kwenzekani uma ukukususa?
Ucingo Fly 4416 - Ukucaciswa
Yini opholile ngoba izinja kangcono?
Club Azuri kuyona 4 *, Hurghada Ihhotela Izibuyekezo